Lwesine, Okthobha 9, 2008 NgeCawa, ngo-Novemba 3, 2013 Douglas Karr
Udliwanondlebe olukhulu kunye Inkcazo elula yekhompyuter yelifu on WishTV nomhlobo wam, uBrian Wolff, e Luhlaza.
Itekhnoloji enomdla ethi, ndiyakholelwa, ekugqibeleni iya kubandakanya yonke i-Intanethi. Ukuba ungathanda ukufunda incwadi enkulu kwikamva lekhompyutha, ndingacebisa UNicholas Carr Utshintsho olukhulu.
Umvelisi weFavicon: Kutheni ungenayo iFavicon?
Oktobha 9, 2008 ngo-9: 15 PM
Ndandiyithanda iSwitch enkulu. Ngokwenene indinike indlela eyahlukileyo ngokupheleleyo yokujonga ikhompyuter kunye ne-intanethi. Njengoko itekhnoloji iguquka, ukufudukela kwindawo ye-Cloud Computing kunengqiqo kwiinkampani zabo bonke ubungakanani.
Kwaye uBrian wenze umsebenzi omhle kakhulu wokuchaza kule vidiyo!